Firenena tsy misy Visa ho an'i Irak - ALinks
Ny olom-pirenena pasipaoro Irak dia afaka mitsidika firenena valo tsy manana visa. Svalbard, Malezia, Bermuda, ary Dominica dia anisan'ny firenena ambony.
Raha jerena ny Index Passport Ranking Index, ny pasipaoro Irak dia faha-107. Izy io dia laharana ho pasipaoro laharana faharoa farany ambany indrindra. Firenena 27 ihany no manolotra fidirana tsy misy visa ho an'ireo tompona pasipaoro Irak. Anisan'izany i Sri Lanka, Dominica, Madagascar, ary Seychelles. Ny mpihazona pasipaoro Irak dia mila maka visa ho an'ny toerana 202 alohan'ny handehanany. Vokatr'izany dia ambany ny laharan'ny pasipaoro amin'ny isa amin'ny isa amin'ny fivezivezena manerantany. Ny Iraqis dia tsy maintsy mangataka visa mialoha amin'ny toerana lehibe toa an'i Etazonia sy ny Vondrona eropeana. Ny mpangataka dia tsy maintsy mampiseho antontan-taratasy toy ny porofom-bola. Ary tapakila fiaramanidina miverina rehefa mangataka visa.
Laharana ny pasipaoro Irak
Zavatra izay mitana ny laharana pasipaoro:
Ny isan'ny firenena mamela ny tompona pasipaoro Irak hiditra tsy misy visa. Ary ireo mamela ireo manana pasipaoro Irak hiditra amin'ny alàlan'ny fahazoana visa rehefa tonga. Na ny fanomezan-dàlana elektronika dia mamaritra ny laharana pasipaoro Irak mifandraika amin'ireo pasipaoro manerantany hafa.
Firenena tsy misy visa pasipaoro enina,
Firenena visa-tonga any Irà 20 ary toera-misy eTA iray no misy izao.
Afaka mitsidika firenena 27 ny tompon'ireo pasipaoro Irak. Na tsy misy visa, miaraka amin'ny visa rehefa tonga, na miaraka alàlana elektronika (eTA). Vokatr'izany, laharana faha-107 eran'izao tontolo izao ny pasipaoron'i Irak.
ACCESS-FREE VISA - Toerana 6
VISA AMIN'NY FITIAVANA- Toerana 20
1 Toerana mankany
Momba an'i Iràka
Ny Repoblika Irak mizara lasa governora 19. Manodidina an'i Koety, Arabia Saodita, Jordania, Syria, Torkia ary Iran any Moyen Orient. Baghdad, Nineveh ary Basra no faritany lehibe indrindra. Ny haben'ny firenena dia 437,072 kilometatra toradroa. Ahitana tanety ahitra sy honahona ary tendrombohitra ny velarany. Manana tontolo maina izy io, miaraka amin'ny ririnina mangatsiaka sy ny lanezy eny amin'ny havoana.
Maherin'ny 38.4 tapitrisa ny mponina ao amin'ny firenena. Baghdad no renivohitry ny firenena. Io ihany koa no tanàna be mponina indrindra, misy mponina manodidina ny 8.1 tapitrisa tapitrisa.
firenena afaka visa ho an'ny iraq
Kitendry finday ivelany tsara indrindra ho an'ny solosaina finday
Tanàna tsara indrindra any Torkia mba honenana
Ahoana ny fomba hahazoana visa any Greece?